Sawirro: Khasaaraha ka dhashay qaraxii Hotel Jazeera oo isa soo taraya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Khasaaraha ka dhashay qaraxii Hotel Jazeera oo isa soo taraya
27th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Waxaa soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxii xooganaa ee shalay galab lala eegtay Hotelka Caanka ah ee Jazeera, halkaasoo ay degenaayeen Diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin, iyadoo hotelkan uu ku yaallay goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo.
Ugu yaraan 13 ruux ayaa ku geeriyootay sodomeeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen, qaraxa oo ka dhashay gaari weyn oo kuwa xamuulka ahaa oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, deetana lagu dhiftay gidaarka Hotelka.
Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa waxaa ka mid ah Salmaan Jamaal oo u shaqeeya Telefishinka Universal, iyadoo wariye kale oo lagu magacaabo Maxamed C/kariin Macalin oo Telefishinka Universal ugaga soo waramayay Gobolka Gedo uu ku dhintay, markii gaari ay wateen oo wadada marayay marayay uu qaraxa ku qabsaday.
Agaasimaha Isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in illaa 25 ruux dhaawacyo ah iyo meydadka afar ruux la keenay Isbitaalka, waxaana uu xusay in dhaawacyada badankood ay culus yihiin.
“Waxaa naloo keenay 25 dhaawacyo, afar qof oo dhaawacyadooda fududaa markii adeegii caafimaad loo sameeyay dib ayaa guryahooda loogu celiyay, 21 ayaa jiifta Isbitaalka oo 11 ka mid ah ay xaaladooda culus yihiin, waxay u badan yihiin rayid, dumar ayaa ka mid ah, sidoo kale afar meyd waa naloo keenay”ayuu yiri Dr. Maxamed Yuusuf oo la hadlayay Idaacada VOA.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in qaraxan uu ka duwanaa kuwii hore oo ahaa mid dadka gubi jiray, balse waxaa uu xusay in firirka ka dhashay qaraxan uu ahaa kan saameeyay dhamaan dhaawacyada oo meelo badan uu ka galay jirkooda.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Diblomaasi ka tirsan Safaaradda Shiinaha iyo nin ilaalo ahaa ay ku dhinteen qaraxa, sidoo kale waxaa jira diblomaasi kenyan ah oo isna dhaawacmay.
Laamaha ammaanka dowladda ayaa sheegay in khasaaraha uu ahaa mid u badan dad shacab ah, isla markaana aanay jirin cid mas’uuliyiin ah oo weerarkaas wax ku noqotay.
Waxaa xiran goobtii qaraxa ka dhacay oo markii horeba ay adkeyd in gaadiidka caadiga iyo kuwa kale ay maraan, waxaana la is weydiinayaa, iyadoo wadada aada garoonka diyaaradaha oo saddex bar koontarool oo aad loo wardiyeeyo ku yaalaan sida ay gaariga qaraxa fuliyay ugu suurta gashay.
Al-Shabaab ayaa labo goor oo hore weerartay Hotel Jazeera, iyadoo weerarkii shalay uu ahaa mid hotelka khasaare aad u baaxad leh ka soo gaaray, markii qeyb dhan oo Hotelka uu bur buray.
Hotelka waxaa degenaa Safaaradaha Shiinaha, Qatar iyo Masar oo xafiis ku laheyd.
Qaraxan ayaa ahaa kii labaad oo noociisa ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoo qaraxii ugu dhimashada badnaa ugana xooganaa ee soo mara Muqdisho uu ahaa kii lagu qaaday Hargaha iyo Saamaha oo ay ku dhinteen dad ka badan boqol ruux, kaasoo lagu fuliyay gaari weyn oo kuwa xamuulka ah.